कथा : प्रीति « Janata Samachar
कथा : प्रीति
पिंकीले आँगनको पर्खाल नाघेर बाहिर गएको देखेपछि मुनाले भनिन्, “आमा आमा, कुकुर त गयो पर्खाल नाघेर ।”
आमाले घरको छतबाट जवाफ फर्काइन्, “फेरि त्यही काले कुकुरसँग डुल्न हिँडे होला नी ! पोहोर साल पनि त्यसले पाँचओटा बच्चा पाएको थियो । त्यतिका बच्चा कसरी स्याहार्नु, कहाँ राख्नु । मन नलागि नलागि खोलामा लगेर फालिदिएकी थिएँ । यसपाली पनि बच्चा पाउने भयो भने त म सम्हाल्न सक्दिन । ती साना बच्चा मार्न पनि सक्दिन । यसलाई लखेटिहाल्न पर्यो ।”
घरमूली महिला कराउँदै भित्र पसिन् । “यो त यति साँढे भयो कि सिक्रीले बाँधेर त राख्नै सकिन्न । सानोमा धेरै मायाँ गरिएछ । अहिले मातेर बसिखानै भएन ।”
“बाँध्यो भने त एकथोक बिध्न गरिहाल्छ ।” उनी फतफताउँदै थिइन् ।
“भैगो छोडिदेउ नत । यस्ता पशुका के कुरा गर्नु । राख्न मन नलागे छाडिदिए भैगो नि ।” श्रीमानले बिस्तारै जवाफ दिए ।
“त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ! यो पाल्न ल्याएको हैन र ?”
“यसलाई त जसरी पनि काबुमा राख्नु पर्छ । म त यसलाई ठीक नपारी छाड्दिन ।” रामकुमारीले फेरि जवाफ फर्काइन्।
“त्यसो भए किन झन्झट मान्छेउ त ? सक्छ्याै भने तह लगाउ, नसक्ने भए छाडिदेउ ।” यति भनेर बुढा मालिक वीर सिंह आफ्नो कोठाभित्र पसेर पत्रिका हेर्न थाले ।
रामकुमारीले चिया बनाएर बरन्डामा आउँदै गर्दा भनिन्, “आउनुस हजूर चिया पिउँ । कति पढिरहनु हुन्छ ?”
दुवैजना बरन्डामा बसेर चिया पिउन थाले । उनीहरूले कुकुर गएतिरै हेरिरहे ।
“गयो अब यो, कति दिन आउँदैन । रामकुमारीले फेरि दोहोर्याइन् ।”
“गए जाउस् । चिन्ता नगर । वीर सिंहले बिस्तारै जवाफ फर्काए ।
साँझ पर्यो पिंकी फर्केन । पिंकी फर्कने आस मारिसकेपछि उनीहरुले नयाँ कुकुर किनेर ल्याए । नयाँ कुकुरको नाम पनि पिंकी नै राखियो । यो सेतो रंगको फुक्क परेको मोटो–घाटो थियो । ठूलो घरको बरिपरि घुमिघुमि खेल्ने गर्थ्याे । तर अघिल्लो पिंकीजस्तो लडाकु र सिकारी भने थिएन । नयाँ ल्याए पनि बुढी मालिक्नीलाई पूरानै पिंकीको माया लागेको थियो । नलागोस् पनि किन ? उसलाई उनले सानैबाट नै हुर्काएकी थिइन् ।
दुई महिनापछिको कुरा हो, साँझपख मुनाले आश्चर्य मिसिएको स्वरमा आमालाई बोलाउँदै भनिन्, “हेर्नुस् त, पिंकी फर्केर आयो ।”
रामकुमारी मुनाको स्वर सुनेर कौसीमा निस्किन् । पिंकी अलि दुब्लो तर पेट अलि ठूलो बनाएर आएको देखेपछि उनले कुरा बुझी हालिन् । अनि मनमनै भनिन्, ‘एक दुई दिन बसोस् अनि तह लाउनु पर्छ यसलाई ।’ उता ठूलो पिंकी आफ्नो राज्यमा फर्केजस्तै गरी घरवरीपरि घुमेर जताततै पिसाब गर्दै आफ्नो हैकम कायम गर्दै थियो ।
अर्काै दिन बिहानै रामकुमारीले उनीहरुका लागि खाना लिएर आइन् । दुवै पिकीलाई एकै ठाउ खाना राखिदिएर के गएकी थिइन्, सिकारी पिंकीले सानो पिंकीलाई टोकेरै मार्न खोज्यो । उसले आफनो मात्रै राज गर्न खोज्यो ।
मुनाले आत्तिएर भनिन्, “आमा यसले त मार्नै खोज्यो सानो पिंकीलाई ।”
रामकुमारीलाई अब पूरानो पिंकी घरमा राख्नै मन लागेन । उनले दिनदिनै रिमालाई फोन गर्न थालिन् । यो कुकुर अलि झगडालु भए पनि घरको सुरक्षा गर्छ गुनी छ । यसलाई तिमीले लैजाउ । यसले घरको रेखदेख गर्छ । रिमा र राजन बजारमा बस्थे । घर ज्यादै साँघुरो भएकोले कुकुर राख्न झट्ट राजी भएन् । अन्त्यमा उनीहरुले नलगी सुखै भएन । आफ्नी आमाले भनिरहेपछि कसरी कुरा नमान्नु ?
“ल्याउँ भो कुकुर । घरमा बस्छ । घरमा उभ्रेको खान दिने त हो नि ।” रिमाले भनिन् । दुवै जना कुकुर घरमा ल्याउन सहमत भए । तर सरिता भने सहमत भइन । उसले भनी, “यो कुकुर भन्ने जात मलाई मनै पर्दैन के आमा !”
न बजार न गाउँ । यो आवाशीय क्षेत्र शान्त अनि सुरम्य छ । पिंकी गाउँबाट यो शहरछेउको सानो बस्तीमा आएको छ । उसलाई नौलो लागिरहेको छ । बाटो फराकिलो भएकोले उसलाई ढलीमलि गर्ने ठाउँ छँदैछ । बिस्तारेै उसलाई यो ठाउँ मन पर्न थालेको छ । घरबाट छोरी सरिता बिहानै पाँचबजे कलेज जाँदा उसले मूल बाटोसम्म छोड्न जान्छ । अनि आउने बेला लिन जान्छ । यसो गर्दागर्दै उसले सरिताको पनि मन पगालिसकेको छ ।
छरछिमेकमा अरु पनि कुकुरहरू थिए । तिनीहरुलाई उसले नजिकै पर्न दिँदैनथ्यो । छिमेकीको कुकुर प्रिति त पिंकीको डरले आफ्नो घर छोडेर छिमेकीको घरमा बस्न थाल्यो । पिंकीको ज्यादति झन्झन् बढिरहेको थियो तर रिमा र राजनको विनम्र एवं सहयोगी स्वभावका कारणले छिमेकीहरुले धेरै गुनासो गरेका थिएनन् ।
घरबाट कोही बाहिर जान लागेको थाहा पाउने बिात्तिकै हत्त न पत्त पिंकी नै अगाडि लागिहाल्छ । मानौं उ अंगरक्षक हो । बाटोमा आउने कुकुरहरुको झुण्डलाई एक्लै टोकेर जितेर हिँड्छ । छर छिमेकलाई पनि उ सरक्षा गर्ने भैसकेको थियो । सबैले उसलाई माया गर्थै । सबैको सरक्षा कवच बनेको थियो ।
पिंकी ढलीमली गर्दै दिनहरु बिताउन थाल्यो । दशैँ पनि आइपुग्नै लाग्यो । सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायमै थियो । घुमफिर गर्ने वातावरण बनेको थिएन ।
एक दिन रिमा र छिमेकीहरु आगनमा बसेर चाडपर्वहरु पनि निरास बन्दै गएको कुरा गरिरहेका थिए । त्यत्तिकैमा पिंकी ढल्कदै आँगनमा आइपुग्यो । यसलाई देखेर छिमेकी बाले भने, “नानी यो त ब्याउने बेला भएछ नि ? हेर्नुहोला यसले भोली या पर्सिमै बच्चा जन्माउँछ ।”
दशैको घटस्थापनाको दिन थियो । रिमाले बिहानै ढोका खोलिन् । पिंकी खोर भित्र झोँक्राएर बसिरहेको थियो । उनले मनमनै भनिन् ‘यसले त आजै बच्चा जन्माउने भयो ।’ एकैछिनमा पिंकीलाई ब्यथाले च्याप्न थाल्यो । प्रसव पीडाले रन्थनिएर चिच्याउँदै पिंकीले छवटा बच्चा जन्माइहाल्यो । छिमेकीहरु पिंकी चिच्याएको सुनेर आँगनमा भेला भए । प्रीति पनि दौडदै आएर पिंकीलाई हेरिरहयो ।
“बच्चा नफाली दिनु है । कति राम्रा बच्चा छन् । एक–एकवटा हामी लगि हाल्छौं ।” छिमेकीहरुले पालैपालो भने ।
“बच्चा नफालिदिनु है, पाप लाग्छ । बरु यै हाम्रो घरको कुनामा यसले बच्चा हुर्काउछ । ठूला भएपछि बाँडिदिउँला ।” छिमेकी बुढा बाका कुराले रिमा सहमत भइन् ।
छिमेकी बुढा बाको घरमा प्रिती नामको कुकुर थियो । उसका बच्च जन्मदै भरिसकेका थिए । त्यसैले घरिघरि उसले पिंकीका बच्चालाई हेरेर माया गर्न खोज्थ्यो तर त्यसो गरेको पिंकीलाई मन पर्दैनथ्यो । एक दिन पिंकी दिशा, पिसाव गर्न बाहिर गएको मौका मा प्रितिले उसका बच्चालाई चाट्दै थियो त्यै मौकामा पिंकी आइपुयो । प्रितिलाई टोकेर रगतै बनाइदियो । यो दृश्यले रिमा दिक्क भइन तर केही गर्न सकिनन् । उनले मनमनै भनिन् त पनि त आमा न होस् ,सन्तानको सरक्षाका लागि जे गर्न पनि तयार हन्छस् ।
पिंकीलाई छरछिमेकका धेरैले माया गर्दथे । दशैँको बेला थियो । उसलाई दिनदिनैजस्तै मासुभात मिलिरहेको थियो । रिमाले मनमनै भनिन्, ‘भाग्यमानी नै रैछस् । घटस्थापनाकै दिनमा तैले बच्चा पाइस् ।’
काठमाडौंको चिसो ठाउँ । पिंकीले दिन रात बच्चाको स्याहार गर्न थाल्यो । दिसा–पिसाब जाने बाहेक अरुबेला उ बच्चाकै साथमा हुन्थ्यो ।
दशैं बेला छिमेकीहरुले खसी काटिरहेका थिए । त्यत्तिकैमा छिमेकमा हल्ला–खल्ला मच्चिएको थाहा पाएर रिमा बाहिर निस्किन् । पिंकीले खसिको टाउको चोरेर भाग्यो भन्ने हल्ला रहेछ । लडाकु पिंकीले खसीको ठूलो टाउको मुखमा च्यापेर बच्चा भएतिर दौडेको देखेपछि रिमा अक्क न बक्क भइन् । पिट्न पनि सकिनन् । बच्चालाई हुर्काउन आमाले गरेको मेहनत सम्झेर केही बोलिनन् ।
छिमेकीलाई खसीको एउटा टाउको किनेर राजनले क्षतिपूर्ती दिए । यसरी छिमेकीको गालीबाट पिंकीलाई बचाउने काम भयो । पिंकीको एकछत्र राज बढ्दै गयो । उसले सबै कुकुरलाई जित्दथ्यो । झुत्रे–झाम्रे देखिने लुगा लगाएको मानिस देखे त झम्टीनै जान थाल्थ्यो । एक दिन छिमेककी महिलालाई खेद्दै टाढा पुर्याएछ । ती महिलाले धेरै गुनासो गरिन् ।
पिंकीको रिसाहा स्वभावबारे कतिपय छिमेकीहरूको गुनासो बढ्न थाल्यो । रिमा र राजनले मन नलागि नलागि पिंकीलाई घरदेखि कतै टाढा लगेर छोड्ने निधो गरे । उसलाई अर्को गाउँ लगेर छाडियो । साना बच्चा छाडेर पिकीलाई टाढा परयाए पछि रिमालाई दिनभर मन नरमाइलो लाग्यो । वरपरका मानिसले पिंकीका छाउराहरू रोजीरोजी बाँडेर लगे । दुईवटा छाउरा पुरानै घरमा रहे ।
पिंकीलाई नदेखेपछि निसन्तान प्रीतिले बाँकी रहेका दुईवटा छाउराहरूलाई काखमा लिएर दूध चुसाउन थाल्यो । छिमेकीहरु सबैको आश्चर्यको सीमा रहेन ।
महिना दिनपछि पिंकीले घरको बाटो पत्ता लगाउँदै आइपुग्यो । घरमा आउँदा उसका बच्चालाई प्रीतिले दुध चुसाएर ढोपिरहेको थियो । त्यो देखेर पिंकी आश्चर्य पर्यो । उसले प्रीतिलाई पहिलेजस्तो झम्टिएन । उसले प्रीतिलाई र आफना बच्चालाई एकछिन् हेरिरह्यो । अनि फनक्क फर्कियाे । त्यसपछि पिंकी फेरि फर्केर आएन ।